Iphalethi yombala egqibeleleyo kuyo yonke imisebenzi yoyilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
U-Angela Wright wayiguqula ithiyori yombala ngokuchonga amakhonkco phakathi kweepateni zombala kunye neepatheni zokuziphatha kwabantu. Ufumanise ukuba yonke imibala inokuhlelwa ngokwamaqela eetoni ezine. Emva koko wayiphuhlisa inkqubo Umbala uchaphazela Echaza ikhonkco phakathi kweetoni ezine zombala kunye neempawu ezine zobuntu. Ukuba iboshwe ngokufanelekileyo, abayili banokusebenzisa ifayile ye- Umbala uchaphazela ukulawula umyalezo wephalethi yakho yombala.
1 Isebenza njani imibala yengqondo
2 Umbala weqela 1
3 Iqela lesibini lombala
4 Iqela le3
5 Ubuntu beqela 4
Isebenza njani imibala yengqondo
Umbala kukukhanya, okusondela kuthi kumaza avela elangeni, kwimbonakalo efanayo yombane njengamaza kanomathotholo kunye nomabonakude, ii-microwaves, ii-X-ray, njl. Ukukhanya kuphela kwenxalenye yesibuko esinokuyibona, mhlawumbi echaza ukuba kutheni sikuthatha kancinci kunamandla angabonakaliyo eminye imitha. UIsaac Newton wangqina ukuba ukukhanya kuhamba ngamaza, xa ukukhanya okumhlophe kwakhazimla ngeplism engunxantathu, kwaye xa ukukhanya kwamaza ahlukeneyo kukhanyisiwe kumacala ahlukeneyo, wakwazi ukubonisa ukuba imibala yomnyama (isibonisi) ziyinxalenye yokukhanya.
Xa ukukhanya kuhlasela nayiphi na into enemibala, into iya kuthatha kuphela ubude waveforms ezihambelana ncam nobume bakho beatom kwaye ziya kubonisa ezinye, yile nto siyibonayo. Umbala ngamandla kwaye into yokuba inefuthe lomzimba kuthi ibonakalisiwe amaxesha ngamaxesha kulingo, ngakumbi xa abantu abangaboniyo bacelwa ukuba bachonge imibala ngeminwe yabo kwaye wonke umntu wakwazi ukuyenza ngokulula.
Okufutshane mfutshane ubude bamaza, kokukhona amandla asemzimbeni angaphantsi.
Into ephambili u-Angela Wright waqaphela xa wayefunda i-psychology yembala yayikukuba, ngokulinganayo, akukho mibala iphosakeleyo; Sisikimu sombala esibangela impendulo; Ndingaba nesibhakabhaka esingwevu ngemini yehlobo, kodwa impendulo yethu kuloo grey ngemibala emihle yommandla wehlobo iyakwahluka ngokudityaniswa kwesibhakabhaka esingwevu enomfanekiso omhlophe qhwa.
Umbala weqela 1
Imibala yeqela 1 ilula, ithambile kwaye ifudumele, kwaye iqulethe tyheli, kodwa hayi emnyama. Imizekelo ibandakanya ukhilimu othambileyo, i-turquoise, kunye ne-cobalt. «Bayaphila, benyulu, batsha, bacocekile kwaye banobutsha; konke malunga nesiqalo esitsha, utshilo uWright.
Ubuntu obubonakaliswa yile mibala "bubakhuthaza ngaphandle kwaye bubutsha ulutsha." Ukukhanya kwiinyawo zabo, aba bantu bayakuthanda ukudanisa kwaye banengqondo, kodwa abayithandi into yokuba babotshelelwe kwingxoxo-mpikiswano yezifundo.
Iqela lesibini lombala
Imibala yeqela lesi-2 ipholile (ineblue), midrange (uninzi luqulathe ngwevu) kwaye buthambile, kodwa hayi ukukhanya, umzekelo, i-raspberry, imaroon, okanye isilumko esiluhlaza. Amanqaku abandakanya ubuhle obungaphantsi komgangatho kunye nokuphelelwa lixesha.
"Ubuntu babo bupholile, buzolile kwaye buzolile," utshilo uWright. Banomdla ngaphakathi, kodwa banolwazelelelo kwindlela abanye abaziva ngayo. Abafuni ukuba ngaphambili kwayo nayiphi na into, kodwa baya kuba ngamandla emva kokuqaliswa.
Imibala yeqela lesi-3 ifudumele kuneQela loku-1 (linee-shades ezingaphezulu ezityheli), zinamandla kwaye zivutha umlilo, kwaye iqulethe mnyama. Imizekelo ibandakanya uhlaza lomnquma, iorenji etshisiweyo kunye nesitshalo seqanda.
Inobuhlobo, isiko, kwaye inokuthenjwa, ezi shades zithandwa ekutshisweni nasekusebenzeni kweenkampani ezizinzileyo. Nangona kunjalo, banokudlulisa umlinganiswa ogunyazisiweyo okanye babonakale bephelelwe lixesha ukuba basetyenziswe gwenxa.
Ubuntu beqela 4
Imibala yeqela lesi-4 ineblue. Zicocekile kwaye zikhanya kakhulu, zimnyama kakhulu okanye zinamandla kakhulu. Inomxholo omnyama, omhlophe, umagenta, ilamuni kunye ne-indigo, iimpawu zeli qela zibandakanya ukusebenza ngokukuko, ubucukubhede kunye nokugqwesa, kodwa zisetyenziswe gwenxa, imibala inokubonwa njengengabukeki, ethanda izinto eziphathekayo kwaye ibiza kakhulu.
Ukuziqhelanisa, isayikholoji yombala isebenza kumanqanaba amabini: inqanaba lokuqala zizinto ezisisiseko zengqondo zemibala elishumi elinanye esisiseko, efumaneka kwindalo iphela, nokuba ngowuphi umbala, umbala okanye umbala owusebenzisayo. Nganye yazo inokuba neziphumo ezilungileyo okanye ezingalunganga zengqondo kwaye zeziphi kwezi ziphumo zenziweyo zixhomekeke kwiindidi zobuntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iphalethi yombala egqibeleleyo kuwo wonke umsebenzi